ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: June 2009
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, June 30, 20099comments:
လူချစ်လူခင် များသူတစ်ယောက်၌ ရှိအပ်သည့် အခြားအရည်အချင်းတစ်ရပ်ကား ဟာသဥာဏ် ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ၄င်း၊ လူ့ဘ၀ဟူသည်ကို ၄င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လောကကို ၄င်း၊ ရွှင်မြူးသောစိတ်ဖြင့် ရှုမြင်နိုင်ပါလျှင် တော်ရုံတန်ရုံ ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ ဒေါသအာဃာတ ပွားစရာများသည် အလိုအလျှောက် ပျောက်ကွယ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်လွန်း၊ အစစအရာရာ အလေးအနက်ထားလွန်းလျှင် တော်ရုံကိစ္စလေးသည်ပင် အကြီးအကျယ် အခံရခက်စရာ ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ လေးနက်လွန်းသူ ၌ လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စရပ်တိုင်းသည် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများသဖွယ် လေးလံဖိစီးနေတတ်သည်။ ဟာသဥာဏ် ရှိသူ၌ကား လူမှုဆက်ဆံရေးကိစ္စတို့သည် ပေါ့ပါးရွှင်လန်းစွာ ဆောင်ရွက်၍ ရသည့် ကိစ္စများ ဖြစ်၏။ သူ၍ ဘာဝန်ထုပ်မျှ မရှိပေ။
ရွင်လန်းသာစိတ်ထားရှိသူသည် မိမိကိုယ်ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် မလုပ်။ မိမိကြုံကြိုက်ရသော ပြဿနာသည် သူတစ်ပါးကြောင့် ဟူ၍ချည်း အာဃာတဖြင့် မတွေး။ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာလုပ်ခဲ့မိပေ သကိုးဟု တွေး၏။ ထို့ကြောင့် ခံစရာရှိလျှင်လည်း ခံသာသည်။ ခံနိုင်ရည်လည်း ရှိပေသည်။
ရုပ်ရည်မလှပခြင်း၊ ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားဥစ္စာ ရှားပါးခြင်းစသည့်တို့သည် လူအတွက် ချို့တဲ့ချက် ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယင်းကန့်သတ်ချက်များ အပေါ်ခံယူပုံ၌ လူတစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် မတူညီပေ။ အချို့သည် ယင်းချို့တဲ့မှုများအောက်၌ နာလန်မထူနိုင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ် ကျဆင်း အားငယ်ခြင်းများဖြစ်ကြ၏။ ငါ အရုပ်ဆိုးလိုက်တာ၊ ငါကျောင်းစာကောင်းကောင်း မသင်ခဲ့ရဘူး၊ ငါ့ထက်မွဲတဲ့လူ ရှိမှ ရှိသေးရဲ့လား စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို နာသည်ထက်နာအောင် ထောင်းထုလျက်ရှိကြ၏။ လောကကို ရွှင်လန်းသော ဥာဏ်ဖြင့် ရှုမြင် ရင်ဆိုင်ကြသူ တို့ကား ထိုအကန့်အသတ်တို့၏ ချုပ်ချယ်တားဆီး မှုကို မခံပေ။ အရုပ်ဆိုးသဖြင့် လူတောမတိုး ဆိုသည်မျိုး အဖြစ်မခံရုံမက အချို့လူများဆိုလျှင် ထိုအရုပ်ဆိုးခြင်း ကိုပင် ရယ်စရာရွင်စရာ အဖြစ် အသုံးပြုကာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်သဘင်လောကတို့တွင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် စားသောက် သွားတတ်ကြပေသေးသည်။
ဖေမြင့် (စိတ်၏ သတ္တိစွမ်းအားများ) စာအုပ်မှ ဖော်ပြပါသည်။
ရေးသားသူ may16 at Saturday, June 27, 20099comments:
မေ၁၆ ဆားချက်ပါတော့မယ်။ တင်ရတဲ့ ပိုစ့်လေး တွေ စိပ်လာတော့ ဘာတင်ပေးရမှန်းကို မသိဘူး။ အလုပ်ကလည်းတဖက်..ကွန်နက်ရှင်ကမကောင်း နဲ့ရှုပ်နေတာပါဘဲ။ အဖေများနေ့ ဆိုတာ လည်း သိသာသိလိုက်တယ် ဘာမှ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့တော့ တင်စရာ စာများရှာရင်း တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရောက်မဲ့ ဆရာကောင်းသန့်ရဲ့ သမီးလေးဖတ်ဖို့ စာ (၃) ကိုတွေ့ပါတယ်။ အင်း….အတော်ပဲ…အချိန်တိုတိုလေးနဲ့ မြောက်တဲ့စာ တွေ့ ပြီ ဆိုပြီး အားရပါးရတင်လိုက်ပါတယ်။ မေ၁၆ ကို အဖေက ဆုံးမ နေတာ လို့ စိတ်ထဲမှာ မြင်နော်..။
စကား ၊ စကား ပြောပါများ
စကားတွေ အမျာကြီး ပြောတဲ့အခါ
စကားထဲမှာ ပါလာ တတ်တယ်။
သူများ အကြောင်း များများသိမယ်။
ကိုယ်က များများ ပြောရင်လည်း
သမီး ကြိုးစား လေ့ကျင့် ထားသင့်တယ်….။
စွဲစွဲလန်းလန်း ဖြစ်နေတတ်တာ ဟာ
အဲဒီ အချစ်ကြောင့် လူတွေဟာ
မခွဲခြားနိုင်ဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြတယ်။
နေရာတကာ သူ့အလိုကို မလိုက်မိစေနဲ့။
အသီးအရွက် ကိုသာ စားတဲံ
ယုန်လေး တစ်ကောင် အတွက်တော့
ရေး စိုက်စရာ ဖြစ်မလာ စေပါဘူး။
ဆား နဲ့ တူတဲ့ အဖော်ကောင်းကို ရှာနော်။
နည်းနည်း ငံ ပေးတယ်။
များများသုံးရင် များများ ငံ ပေးတယ်။
သူ့သဘောနဲ့ သူ ဘာမှ မလုပ်ဘူး။
သူ့ကို အသုံးပြုတဲံ သူရဲ့ အလိုဆန္ဒကိုသာ
သူ့ကို အားထား ရတယ်လေ။
ဆား နဲ့တူ တဲ့
အဖော်မွန် အဖော်ကောင်း ကို
ဖေဖေ ဆုတောင်း ပေးမယ်နော်။
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, June 24, 2009 11 comments:
မြေလူးငှက်တစ်ကောင်ဟာ ၀က် သစ်ချပင်အောက်မှာ နားပြီး မြေလူးငှက် တွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း သီချင်းဆိုနေ တာပေါ. သူ့ကို စွန်ကမြင်လိုက်တယ်. . .
ဒီစွန်က အစာရှာမတွေ့လို့ ဗိုက်ဆာနေတယ်. . ဒါကြောင့်သူ့ဆီ ထိုးဆင်းခဲ့ပြီး ချီသွားတယ် . .
မြေလူးငှက် ဟာ စွန်ရဲ့နှုတ်သီးဖျားမျာ သေရတော့မလို ဖြစ်လို့ရုန်းကန်နေတယ်. . . စွန်ကိုလည်း အသက်ချမ်းသာပေးဖို့ တောင်းပန်တယ်. . . . .
"ကျွန်တော်ဟာ အကောင်ငယ်လွန်းပါတယ်. . ခင်ဗျားဗိုက်ဆာနေရင် ကျွန်တော့ထက် အကောင်ကြီးတဲ့ ငှက်ကို စားသင့်ပါတယ် . . "
ဒါပေမယ့်စွန်က . . . "ငါ့လက်ထဲမှာ မိထားတဲ့အစာကို လွှတ်ပြီးရှာမတွေ့သေးတဲ့ အစာနောက်ကို လိုက်မယ် ဆိုရင် ငါဟာ အသိညဏ်မရှိသူဖြစ်နေမှာပေါ." . . . လို့ အဖြေပေးလိုက်တယ်. . .
(လက်ရှိရထားတဲ့ . . . . ဥစ္စာကို ပစ်ပယ်ကာ ပိုပြီးဟန်ကျစေမယ့် ပိုကောင်းမယ့် ဥစ္စာကို
မျှော်မှန်းခဲ့ရင် ဆင်ခြင်မှု မရှိရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်)
ရေးသားသူ may16 at Sunday, June 21, 20095comments:
ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာပေးသဖြင့် ကျွန်မတို့မှာ သားသုံးယောက်တိတိရရှိခဲ့သည်. . . သူတို့က သူတို့ တစ်ဦးချင်းစီမှာ ပါလာသည့် ထူးခြားသော ဗီဇသဘာဝကိုယ်စီဖြင့် ကျွန်မတို့အတွက် ၀မ်းသာကြည်နူးစရာလေးတွေ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်. . .
သည်သုံးယောက်ထဲမှ သားအလတ် ဘီလီကတော့ ထာဝရအကောင်းမြင်သမားလို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်. . . သူ့မှာ အဲသည်လို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိနေခြင်းက သူ့မွေးရာပါ ပစ္စည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်. . .
သူအသက် (၅) နှစ်လောက်တုန်းကလည်း တီဗွီထဲက လူတစ်ယောက် ထိပ်ပြောင်မပြောင် သူ့အစ်ကိုနှင့် ငြင်းကြသည်. . . . . .သူက
"ထိပ်ပြောင်တာမဟုတ်ဘူး ၊ အစ်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါသာ ထိပ်ပြောင်သလိုမြင်ရတာ. . သူ့ဘာသူ ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်တွေအများကြီးပဲ ဟု" ဘီလီက ဆိုလေသည်. . .
တစ်နေ့မှာတော့ အဲသည်လို အကောင်းမြင်စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်မတို့ ကြားနာခဲ့ကြရပါသည်. .
ကျွန်မတို့ရဲ့ တတိယသားလေး တင်နာ သွေးဥတွေ ပျက်စီးသော ရောဂါဖြင့် ဆုံးသွားရှာလေသည်. တင်နာလေးက အသက်နှစ်နှစ်ပင်မပြည့်သေး၊ လပေါင်း ၂၀ ပဲရှိသေးသည်.
တင်နာလေး သဂြိုလ်ပြီး နောက်တစ်ညမှာ ဘီလီကို သိပ်ရင်း ကျွန်မလှဲနေသည်. . သည်ညမှာတော့ ကျွန်မတို့ ပြောစရာစကား သိပ်မရှိကြပါ. . . . တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍ သာနေကြသည်. .
ရုတ်တရက် ဘီလီက စကားစသည်. . . "သားတို့အားလုံးအတွက် စိတ်မကောင်း ပါဘူးမေမေ. . ဒါပေမယ့် တခြားလူတွေအတွက သားပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုပဲ. . "
"ဘယ်ကတခြားလူတွေလဲသား " ဟု ကျွန်မကမေးမိသည်. .
"တင်နာ့ကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးလိုက်ကြတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ. . ဘာပဲပြောပြော သားတို့က တင်နာလေးနဲက လပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး အတူနေလိုက်ရတာဆိုတော့ အများကြီးကံမကောင်းဘူးလား ၊ မေမေ စဉ်းစားကြည့်လေ. တင်နာ့ကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူး ကြားတောင်မကြားဖူးလိုက်တဲ့ လူတွေ ဘယ်လောက်အများကြီးရှိမလဲ ၊ သူတို့ထက်စာရင်တော့ သားတို့က သိပ်ကို ကံကောင်းတာပါ မေမေ" တဲ့
ဖေမြင့် ( Beth Dalton ၏ The Eternal Optimist)
ရေးသားသူ may16 at Thursday, June 18, 2009 8 comments:
စိတ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းနေမှ ချမ်းမြေ့တတ်လေရဲ့။ စိတ်ထဲမှာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါ လူကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်း လန်းဆင်းကြည်လင်မှုတွေ ကင်းမဲ့နေတတ်တယ်. . . ဒါကြောင့် စိတ်ကိုရှင်းအောင်ထားတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ် . .
စိတ်ကို မရှင်းလင်းအောင် ပြုမူတတ်သူဟာ သံသယဖြစ်တယ် . . . သံသယ ဟာ ယုံကြည်မှုတွေကို ရိုက်ချိုးပြီး မေတ္တာတရားကို လည်း ဖျက်ဆီးပစ်တတ်တယ် . . .
ဒီတော့ သံသယကို စိတ်ထဲမှာ ကြာရှည် သိမ်းဆည်းထားတာမကောင်းပါဘူး . . သံသယရှိတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်မေးမြန်းကြရမယ် . . . မြုံထားတဲ့ အကျင့်ကို ရှောင်ကြရမယ်. . . စူးစမ်းလေ့လာကြရပါတယ် . . ပြီးတော့ အလျင်အမြန် ဖြေရှင်းကြရမယ် . . ရှက်ရွံ့ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အားနားခြင်းဆိုတာတွေကို စိတ်ထဲမှာ မွေးမြူမထားသင့်ပါဘူး မသိရင်မေး မစင်ရင် ဆေးကြရပါမယ်. . .
စိတ်ထဲမှာ အစိုင်အခဲအဖြစ် ကြာရှည်အောင် ထားတဲ့အခါ စိတ်လေးလံနေမှာ အမှန်ပဲ. . တစ်စတစ်စ ရင့်မှည့်လာတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲထက်တဲ့ အသီးလိုပဲ . . တဖြည်းဖြည်း ကြီးမားလာတဲ့ သံသယစိတ်ဟာ တစ်ချိန်မှာ ပေါက်ကွဲလာပြီး မိမိကိုယ်ပါ အထိနာရစေပါတယ် . .
ဒါကြောင့် စိတ်ကို ရှင်းနိုင်သမျှ ရှင်းအောင် မွေးမြူကြရပါမယ် . . စိတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေမည့် ချည်နှောင်မှုမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ကြရပါမယ်. . စိတ်ထဲရှင်းလင်းအောင်.စိတ်ကို အချည်မခံပါနဲ့ . .
စိတ်ရှင်းလင်းစွာနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ စိတ်ထားပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါစေ..
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, June 16, 20097comments:
အနာသည် မိမိကိုယ်၌ဖြစ်လျှက် မိမိအကျိုးကို မရွက်ဆောင်။
ဆေးပင်ဆေးရွက်သည် တော၌ဖြစ်လျှက် အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်၏။
Disease, though arising in the body does not bring benefit.
Herbs though growing in the forest can be beneficial.
ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို ရွက်ဆောင်မူသူစိမ်းပင် ဖြစ်လင့်ကစား အဆွေအမျိုးဟု မှတ်ယူရာ၏။
ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို မရွက်ဆောင်လျှင် မိတ်ဆွေရင်းချာပင်ဖြစ်လင့်ကစား သူစိမ်းဟု မှတ်ယူရာ၏။
If one brings benefit,astranger may be considered as relative.
If one does not confer benefit, even though he is close relative, may be consideredastranger.
မျက်ကွယ်၌ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်တတ်ပြီး ရှေ့တွင်မူ ချိုချိုသာသာ စကားဆိုတတ်သူကို အဆိပ်အိုးမှ ပျားရည်ကို ရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။
Showing in gratitude in the absence, being sweet in the presence suchaperson should be shunned just like shunning the honey inapot of poison.
ဥစ္စာ စီးပွားပျက်လျှင် မိတ်ဆွေ၊ သားမယား ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများသည်ပင် စွန့်ခွာတတ်၏။
ဥစ္စာ ရှိသူကိုသာ မှီခို ပေါင်းသင်းလိုကြ၏။
လောက၌ စီးပွား ဥစ္စာသည် ခင်ပွန်းကြီးဖြစ်၏။
If wealth is lost, friends, son and wife, brothers and sisters may leave away.
They want to associate only to the rich.
Wealth in the world isagreat friend
ရေးသားသူ may16 at Sunday, June 14, 20092comments:
" သင်ကွယ်လွန်သေဆုံးပြီးနောက်တွင်"
သင့်အကြောင်းတရား ၊ အကောင်းများက
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, June 13, 2009 17 comments:
ရေးသားသူ may16 at Thursday, June 11, 2009 13 comments:
အောင်မြင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီပါ. . .
အောင်မြင်မှုဟူသည်. . မိမိရယူချင်သော အရာတစ်ခုခုကို ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်ပြီး ရအောင်ယူနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်. .
ပျော်ရွှင်မှုဟူသည် . . မိမိရရှိထားသော အရာတစ်ခုခုကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်. . . မိမိလိုချင်သောအရာကို မရပါက မအောင်မြင်မှု. . . မိမိရရှိနေသောအရာကို မနှစ်သက်ပါက မပျော်ရွှင်မှု. . .
အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရပါမည်. . . အားထုတ်မှုရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်ပါသည်. . .
ပျော်ရွှင်အောင်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ယောနိသော မနဿီကာယ သဘောထားရှိတတ်ရသည်. . . နေရသော မြို့ကိုမကြိုက်၊ နေရသော ရပ်ကွက်ကိုသဘောမကျ၊ နေရသော အိမ်ကို မနှစ်သက် နေရသော အခန်းကို မလိုချင် . . အလိုမကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် . . မြို့၏ အပြစ်မဟုတ်. . . မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ဘ၀သည် သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်. . .
ဖြစ်ရာဘ၀၊ ကျရာနေရာ၊ ရောက်လာသည့် အခြေအနေမှာ အထိုက် အလျှောက် အဆင်ပြေအောင် ညှိယူနိုင်ပါမှ ပျော်ရွှင်မှုကို ရပါမည်.. . . ရောင့်ရဲကျေနပ်၍ ရပ်တည်နေရန်မဟုတ်သော်လည်း . . ငြိုင်ြငြူစူနေသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲနေရုံမှအပ အကျိုးမရှိလှပေ. . .
အောင်မြင်အောင်လည်း ကြိုးစားရမည်. . .
ပျော်ရွှင်အောင်လည်း နေတတ်ရပါမည်. . .
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, June 09, 20099comments:
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, June 07, 2009 12 comments:
တချို့ကလည်း ငယ်ဘ၀ကိုလွမ်းသတဲ့. . . တချို့ကျတော့ လွမ်းမိတာတွေကို အမျိုးမျိုးပြောတတ်ကြတယ်. . . ချစ်သူကိုလည်း လွမ်းကြပြန်သတဲ့. . . ကိုယ်ကလွမ်းသလို ကိုယ့်ကို ပြန်လွမ်းမယ် မလွမ်းဘူးဆိုတာတော့ လွမ်းရတဲ့သူက မသိနိုင်ပါဘူး . . . .
အဲဒီတော့ အလွမ်းစိတ်ဆိုတာ တစ်ဖတ်သတ်ပါပဲ အလွမ်းဆိုတာ အချိန်ပိုနေတဲ့သူတချို့အတွက်များလား . တချို့က တခြားလုပ်စရာ ကိုင်စရာကိစ္စမရှိတော့တဲ့အခါ အချိန်တွေပိုနေတတ်ကြတယ်. . . .အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့စိတ်တွေက ပြေးချင်ရာကို လျှောက်ပြေးနေလိမ့်မယ်. . .အဲဒီအချိန်မှာ အလွမ်းဆိုတာပေါ်လာမှာပါ. . .
လွမ်းတာနဲ့ သတိရတာ လည်းမတူပါဘူး လွမ်းတယ်ဆိုတာ သတိရတာထက် ပိုပြီး နက်နဲသိမ်မွေ့ပါတယ်. . . .ဒီနေရာရောက်တော့ တစ်ယောက်၂ကို သတိရတာရှသလို၊ အဲဒီတုန်းက သူငါ့အပေါ် ဒီလိုလုပ်သွားတာကို သတိရသေးတယ်ဆိုပြီး မကျေနပ်စိတ်နဲ့သတိရတတ်ကြပါတယ်. . .
လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲခြင်းဆိုတာကျတော့ လွမ်းရသူအဖို့ ဆုံးရှူံးရခြင်းကို ပါ ဖော်ညွှန်းပါတယ်.. .
အရာအားလုံးမှာ ဥပက္ခာဆိုတာကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါ..... ချစ်ခြင်း၊မုန်းခြင်းမရှိတဲ့ သဘောကို ဖော်ညွှန်းပါတယ်... မုန်းတယ်ဆိုတာက တစ်ချိန်မှာ ခွင့်လွှတ်တတ်ရင် ပြန်ချစ်ခင်ကြင်နာလို့ ရနိုင်ပါတယ်...
ဥပက္ခာကျတော့ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်နေသေးတယ် ဆိုရင်တောင်မှ အဲဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့၊ မကျန်တော့တဲ့သဘောပါ... ဥပက္ခာပြုလိုက်ပြီဆိုရင် နာကျည်းခြင်း အဆင့်ထက် ပိုကျော်လွန်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်....
လူတိုင်း လွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ ဥပက္ခာပြုခြင်း များ အားလုံးကင်းဝေးကြပါစေ..
(ခုထိမမေ့နိုင်တဲ့လွမ်းချင်းနဲ့ ကျွန်မအမေကို လွမ်းပါတယ်... )
ရေးသားသူ poemflower at Friday, June 05, 20099comments:
လူတစ်ယောက်၏တန်ဖိုးကို မည်သည့်စံဖြင့် တိုင်းတာမည်နည်းဟူသော မေးခွန်း၏ အဖြေကို အတွေးအခေါ် ပညာရှင်တို့ အဖုံဖုံအလီလီ ရှာဖွေကြည့်ခဲ့ကြသည်. . . ဦးစွာပထမ "တန်ဖိုး" ဟူသော စကားရပ်၏ အနက်ကိုဖွင့်ကြရာတွင် အသုံးချတန်ဖိုး ဟူသည်ကို တွေ့ရှိကြသည်. . နေရာဌာန၊ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် အသုံးကျခြင်း၊ အသုံးမကျခြင်း အပေါ်၌မူတည်၍ တန်ဖိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ကြသည်. . .
ဥပမာတစ်ခု ထုတ်နုတ်ရလျှင် ရွှေ၊ငွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား တို့သည် ယင်းတို့အား ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၀တ်ဆင်နိုင်မှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ နေရာရွေးပြီး တန်ဖိုးရှိသည်. . "နေရာရွေးပြီး" ဆိုရာ၌ ကျောက်မျက်ရတနာများ ၀တ်ဆင်နိုင်ခြင်းကို အထင်ကြီးအားကျတတ်သော လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း၌ ထိုသို့ဝတ်ဆင်နိုင်သူသည်. . . လူရာဝင်သော တန်ဖိုးရှိသည်. . .
သို့ရာတွင် ညဏ်ပညာ အမြော်အမြင် ကြီးမားသူများကိုသာ တန်ဖိုးထားတတ်သော ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်း၌မူ ရွေတွေ စိန်တွေသီးနေအောင် ၀တ်ဆင်လာသူဖြစ်စေကာမူ အထင်ကြီးလေးစားခြင်းခံရဖို့ ဝေးစွ . . . ထိုသို့ဝတ်ဆင်ဗန်းပြလာခြင်းသည်ပင် ရိုင်းပြရာကျနေတတ်ပေသည်. . .
အလားတူပင် ကျမ်းအစောင်စောင်ကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနှောက်၍ ပညာဗဟုသုတအရာ၌ မတစ်လုံးကျေဟု ဆိုနိုင်လောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ရွေရှိမှာ ငွေရှိမှ လူရာဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်သော စီးပွားရေး သမားများ အလယ်သို့ ရောက်သွားပြန်လျှင်လည်း သူ့အား အဖက်လုပ်ဖို့ပင် ၀န်လေးကြပေလိမ့်မည်. . .
လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသော အရာရှိကြီးတစ်ဦးသည် ရာထူးလက်ကိုင် ရှိနေချိန်၌ တန်ဖိုးရှိနေပေသည်. . သူ၏ရာထူးကို အကြောင်းပြု၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေကြသူများက သူ့အား တလေးတစား တန်ဖိုးထားပြီး ဆက်ဆံကြပေလိမ့်မည်. . . သို့ရာတွင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရာထူးလက်ကိုင်မရှိလျှင်တော့ သူ၏တန်ဖိုးသည် ကျသွားပေမည် . . .အရှိန်အ၀ါသြဇာ ပါမရှိတော့လျှင် သူ့၌တန်ဖိုးဟူ၍ပင် မရှိတော့ပေ. .
သို့ဖြစ်ရာ ပညာ၊ဥစ္စာ၊ သြဇာ အာဏာတို့သည် သူ့နေရာနှင့် သူ ၊ သူ့အချိန်အခါနှင့် သူတန်ဖိုးကြီးခြင်း၊ တန်ဖိုး လျှော့နည်းခြင်းဟူ၍ ရှိတတ်သည်ကို သတိချပ်အပ်သည် ယင်းသို့ဖြစ်ခြင်းမှာလည်း လောက၏ နိယာမပင်ဖြစ်သည်. . .
လောက၏နိယာမကို ဆင်ခြင်တုံ့တရားထားရှိသူများသည် မိမိ၏တန်ဖိုးကို ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းကြသင့်သည်. . . ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်သိက္ခာဟူသည်မှာ ပညာ၊ ဥစ္စာနှင့် သြဇာအာဏာ တို့ထက် ခိုင်မြဲသော ဖြောင့်မှတ်တည်ကြည်မှုပင် ဖြစ်သည်. . လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် သက်တမ်း၏ အများစုအချိန်ကာလများကို ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စွာ နေထိုင်သွားပါက သူ၏လူ့တန်ဖိုးသည် အစဉ်အမြဲ မြင့်မားနေမည်သာဖြစ်သည်. . . .
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, June 03, 20099comments: